Sida Loogu Kordhiyo Iibsiga Boostada Iibintaada Istaraatiijiyad Haysashada Macaamiil Oo Waxtar Leh | Martech Zone
Si loo kobco loona noolaado ganacsiga, milkiileyaasha ganacsatadu waa inay qaataan farsamooyin iyo xeelado fara badan. A istaraatijiyad haynta macaamiisha waa mid muhiim ah maxaa yeelay waxay aad uga waxtar badan tahay istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah marka ay timaado kordhinta dakhliyada iyo wadista soo noqoshada maalgashigaaga suuq-geynta.
Helitaanka macmiil cusub waxay ku kici kartaa shan laab ka badan inta lagu hayo macaamiisha jirta. Kordhinta haynta macaamiisha 5% waxay kordhin kartaa macaashka 25 ilaa 95%. Heerka guusha ee u iibinta macaamiil aad horey u haysatay waa 60 ilaa 70%, halka heerka guusha ee iibinta macmiil cusub uu yahay 5 ilaa 20%.
Mashiinka Dibedda Suuqgeynta Haysashada Macaamiisha iyo Suuqgeynta Macaamilka
Helitaanka macaamiisha cusub waa daruuri daruuri ah oo adag oo lagu kobciyo adiga ganacsi, laakiin kordhinta qiimaha macaamiisha hadda waa habka ugu fudud ee lagu kobcin karo dakhligaaga iyo faa'iidadaada. Qorsheynta iyo hirgelinta istiraatiijiyadda haynta macaamiisha ayaa muhiim ah.
Haddii aad qorshaysay oo aad billowday istiraatiijiyad haynta macaamiisha iyo barnaamij daacad u ah macaamiishaada, maxaa xiga oo kor u qaadaya sii-haynta macaamiisha barnaamijkaaga?
6 Dariiqo oo lagu Kordhiyo Natiijooyinka Haysashada Macaamiisha
Ogeysii qiimaha macaamiishaada - Loogu talagalay barnaamijka sii-haynta macaamiishaada xagga soo-jeedinta qiimaha ee aad u fidineyso macaamiishaada. Kaliya tuurista dalabyada rajeynaya inay wax badan ku bixin doonaan ayaa hoos u dhigeysa macaamiishaada. Si cad ugula hadal qiimaha aad siineyso macaamiishaada isla markaana qorsheyso waxaad ku siin karto, qiimaha ay ku kacayso, iyo sida ay ku ogaan doonto qiimaha aad kula xiriirto
Dhis xiriirro qof-qof - Digitization iyo teknoolojiyada cusub ayaa gebi ahaanba isbedelay sida aan u wanaajin karno isgaarsiinta una horumarin karno khibradaha macaamiisheena. Ganacsi kasta, oo ay ku jiraan kuwa soo jireenka ah, wuxuu hadda la qabsanayaa dhisidda xiriirro qof-ilaa-qof ah. Waa muhiim in macaamiisha la dhex galiyo booqashooyinka u dhexeeya si looga ilaaliyo inay soo noqdaan. Isgaarsiinta waa inay ka gudubtaa xiriirka iibiyahaagu la leeyahay macaamiishaada.
Ka dhig iyaga mid cusub (U dir-emayllada / SMS / Ogeysiiska riix) - Weligaa ha u oggolaan macaamiishaadu inay iloobaan astaantaada ama haddii ay leeyihiin dhibco daacadnimo. Cusboonaysiinta macaamiishaada ee ku saabsan dheelitirka daacadnimadooda waxay sii hurin kartaa qarashkooda si ay kuugu soo noqdaan goor dhow. Waad dooran kartaa inaad u dirto emayllo, SMS, ama xitaa ogeysiisyada gudaha si toos ah macaamiisha aan dhowaan ka adeegan. Xitaa fudud hambalyo iibsi kasta ka dib wuxuu kobcin karaa xiriirkaaga - taasoo ka dhigeysa inay dareemaan qaddarin iyo rabitaan.
Soo Bandhig Barnaamijyada VIP - Barnaamijyada VIP-du waxay ku dhiirrigeliyaan macaamiisha inay ku ilaashadaan heerka aqoontooda astaantaada. Noocyada badankood waxay siiyaan xaaladda VIP macaamiishooda soo noqnoqda. Barnaamijyada VIP waxay ku dhiirrigeliyaan macaamiishaada inay ka fikiraan naftooda qayb ka mid ah bulshadaada halkii ay ka ahaan lahaayeen macaamiil caadi ah.
Ka faa'iideysiga xogta hagaajinta - la socoshada sida barnaamijkaagu u shaqeynayo, falanqaynta warbixinnadiisa, iyo dib u eegista xogta aad ku qabato barnaamijkaaga daacadnimada ayaa kaa caawin doonta hagaajinta qorshahaaga mustaqbalka si loo kordhiyo sii-haynta macaamiisha. Xogta sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wanaagsan u qaybiso macaamiishaada. Qeybinta macaamiisha ayaa ah hab ku habboon oo lagu xoojinayo jawaabta dadaalladaada haynta iyadoo la qaabeynayo lana beegsanayo abaalmarinnada qeyb kasta.
Ku dar barnaamijka gudbinta - Macaamiishaadu waa kuwa kuu dooda. Ha seegin fursadda aad ku dhiirrigeliso iyo macaamiishaadu inay ku dhiirrigeliyaan meheraddaada asxaabtooda, asxaabtooda, iyo qoyskaaga adoo adeegsanaya abaalmarinno. Dadku waxay ku kalsoon yihiin asxaabtooda nooc kasta oo suuq-geyn ah.
U rogida macaamiisha macaamiil daacad ah iyo u doodayaal waa waxa nooc kasta u baahan yahay. Tilmaamaha kor lagu falanqeeyay ee ku saabsan sida loo xoojiyo sii-haynta macaamiisha ee iibsashada kadib waxay dhisi doontaa xiriir adag macaamiishaada, waxayna kordhin doontaa khadkaaga hoose. Istaraatiijiyad sii-haynta macaamiisha ee iibsashada kadib si hagaagsan loo qorsheeyay ayaa hubaal kaa caawin doonta inaad horumariso khibrada macaamiisha.
Barnaamijka Barnaamijka Daacadnimada Macaamiisha Poket
Jeebka waa barnaamij daacadnimo ah iyo CRM oo loo dhisay macmiilka iyo baayacmushtarigaba. Faa'iidooyinka Poket iyo astaamaha waxaa ka mid ah:
Si sahlan loo Isticmaalo - Iyadoo la adeegsanayo sheybaar diyaarsan Poket, waxaad si fudud ku bilaabi kartaa barnaamijyadaada daacadnimo ee macaamiishaada 10 daqiiqo gudahood.
Xog kaa caawineysa inaad si fiican u iibiso - Fahmitaan macaamiishaadu caadooyinka kharashka. Qalabka falanqaynta ee Poket wuxuu ku siinayaa aragti shimbir ah oo ku saabsan macaamiladaada.
Qiimaha wax ku oolka ah ee Caalamiga ah - Poket wuxuu siiyaa awoodaha awood-darajo ganacsi qiimaha ugu jaban ee aad ka heli doonto suuqa.
Tag dijitaal, mobilada tag - U rog rogo barnaamijkaaga daacadnimada firfircoon ee falcelinta mid firfircoon, soo jiidasho leh. Poket waxay kaa caawineysaa inaad macaamiishaada kaqeyb qaadato marinnada isgaarsiinta ee ay doorbidaan kuna dhiirrigeliso inay soo noqdaan.
Barnaamijyada 'Poket daacadnimada' waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsigaaga. Laga soo bilaabo kaarka fudud ee feerka, illaa xalka ka-qaybgalka macaamiisha ee aadka loo bartilmaameedsaday, Poket wuxuu kaa caawinayaa inaad si tartiib tartiib ah ugu beddesho barnaamijkaaga daacadnimada si aad u noqoto mid firfircoon oo u hawlgala macaamiishaada.
Ku Bilaw Poket
Tags: haynta macaamiishaemailbarnaamijka daacadxiriirka qof-ilaa-qofshakhsi ahaaneediibsiga kadibhayntaistaraatijiyad hayntaqiimeeyn soo jeedin
Oliva waxay leedahay 6 + sano oo khibrad u leh suuqgeynta iyo horumarinta ganacsiga guud ahaan juqraafiyo badan oo leh ururo waaweyn iyo kuwa yaryar. Xilligan, iyadu waa Maamulaha Suuqgeynta shirkadda Poket. Jeebka waa dariiqa ku saleysan dariiqa Maareynta Daacadnimada ee ka caawisa ganacsiyada inay sii hayaan macaamiisha isla markaana kordhiyaan iibka.